Canonical ichaenderera ichipa kukosha kuUbuntu kunyangwe ichaenda kuruzhinji | Linux Vakapindwa muropa
Mark Shuttleworth, CEO weCanonical, atora mukana wekugara kwake kuOpenStack Summit 2017 kupa ruzivo rwakakosha nezve iyo kambani uye nezve Ubuntu, kugoverwa kwayo.
Chokutanga, Shuttleworth aida kudzima runyerekupe wanga uine zvekusiya Ubuntu. Ruzivo rwakadai ndere nhema uye Canonical ichaenderera ichikoshesa Ubuntu yePC. Kuve yavo nyeredzi chirongwa uye pakati pechiitiko chayo. Chinhu chakakahadzika mushure mekuvharwa kwekuvandudzwa kweUnited uye Ubuntu Runhare.
Asi aya anga asiri iwo chete ruzivo kubva kune nyowani CEO weCanonical. Shuttleworth ichaedza kutora kambani kuruzhinji.
Canonical ichaenderera ichipa kukosha kuUbuntu kwePC
Kune izvi kwete chete yakabvisa zvirongwa zvinodya zviwanikwa nemari ichatangawo yakazvimiririra investor kutenderera wozoenda kuruzhinji, zvinoreva kuti Canonical ichaenda kuruzhinji semamwe anozivikanwa tech makambani
Asi chinotyisa ndechekuti Shuttleworth ichaenderera mberi nekuvandudza chinzvimbo cheIPO chekambani. Ndokunge, zvinhu zvakadaro zvisati zvaitika, zvinogona kudaro Canonical inodzima mamwe mapurojekiti asiri purofiti.
Izvo zvinogadzira uye zvinobatsira zvigadzirwa zveCanonical zvakare zvakurukurwa. A) Hongu, makore matekinoroji uye IoT mapurojekiti akaita Canonical kambani inotungamira mumisika iyi. Kugadzira makambani makuru senge eBay, Netflix kana Wallmart vanoshandisa chikuva chavo kupa masevhisi avo.
Shuttleworth akabvuma izvo Haisi nguva yekutanga iwe kuyedza kuendesa kambani kuStock Exchange, asi panguva iyoyo, muna 2005, kambani yakanga isina mabhenefiti aya kana kubudirira mukati megore matekinoroji.
Pakupera Kufarira kwaCanonical muStock Market kwakonzera kuti mapurojekiti akanaka anyangarike, chimwe chinhu chisina kunaka cheMahara Software nekuti haasi ese mapurojekiti anopa mari. Chero zvazvingaitika, ini ndinovimba ndiwo mapurojekiti ekupedzisira kutambura neizvi, ndokuti, kuti hapachina chirongwa chinofanirwa kubviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Canonical ichaenderera ichipa kukosha kuUbuntu kunyangwe ichizoenda kuruzhinji